हामी फोटोशप | मा परिप्रेक्ष्य सुधार गर्न सिक्छौं क्रिएटिव अनलाइन
फोटोशपमा परिप्रेक्ष्य कसरी सुधार गर्ने
कहिले हामी तस्वीर लिन्छौं, विशेष गरी भवनहरू, हामी केहि विकृत नतीजा पाउँछौं जुन वास्तविकतासँग मिल्दैन.
यदि हामीसँग अर्को फोटो लिने अवसर छैन, वा तपाईं केवल हामीसँग भएको सामग्रीको फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर जान्न इच्छुक हुनुहुनेछ। एडोब फोटोशपले हामीलाई छविको परिप्रेक्ष्यमा परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ.
1 डिजिटल समाधानका साथ समस्याहरू
2 हामी भवनको परिप्रेक्ष्यमा परिवर्तन गर्दछौं
4 दृश्य गाईडहरू
5 छवि विकृत गर्नुहोस्
6 परिमार्जन लागू गर्नुहोस्
7 सामग्री अनुसार भर्न
डिजिटल समाधानका साथ समस्याहरू
हामी यो समस्या फेला पार्नेमा सबैभन्दा सामान्य अवस्था मध्ये एक हो जब हामीले फोटोको बृद्धि गर्दछौं एक उच्च-उचाइ भवन को अनुहार, र यसैले, हामीले तल्लो कोणबाट स्नापशट क्याप्चर गर्नु पर्छ। यो हामी हामीलाई कोण विकृत बनाउँछ.
टेक्नोलोजीले हामीलाई छविहरूको परिमार्जन गर्न र उपकरणहरूको सेटको साथ पुनःप्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ जुन हामीलाई पूर्ण वास्तविकता दिन्छ।
हामी भवनको परिप्रेक्ष्यमा परिवर्तन गर्दछौं
अब हामी तपाइँलाई ए मार्फत सिकाउनेछौं ट्युटोरियल, एक पछि अर्को चरणमा भवनको परिप्रेक्ष्य परिवर्तन गर्न सिक्नुहोस्.
कार्य तालिकाका बिभिन्न छविहरू मार्फत, र यसलाई व्यावहारिक केसमा लागू गर्दा, तपाईं भवनको परिप्रेक्ष्य पुनःप्राप्त गर्न सजिलो र दृश्य तरिकामा सिक्नुहुनेछ। त्यस ट्रिकहरूको साथ जुन हामी तपाईंलाई तल देखाउँदछौं तपाईं कुनै पनि परिस्थितिमा यो प्रभाव लागू गर्न सक्नुहुन्छ समान विशेषताहरूको आवश्यक छ.
सबै भन्दा पहिले हामी, हामी पर्छ छवि खोल्नुहोस् जुन हामी फोटोशपमा पुन: स्पर्श गर्न चाहन्छौं। हाम्रो मामला मा हामी एक भवन पुनर्निर्माण गर्नेछौं। यदि तपाईंले ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने, फोटोको मूल परिप्रेक्ष्य र लेन्सनले उत्पन्न गर्न सक्ने विकृतिको कारण, भवनको अगाडि केही विकृत देखिन्छ, बाँकी भन्दा धेरै अग्लो। हामी जाँदै छौं यो प्रभावलाई सक्दो कसरी सजिलो र सुधार गर्न सिक्नुहोस्.
यदि हामीलाई यसको आवश्यक छ भने हामी सक्दछौं केहि सन्दर्भ लाइनहरु कोर्नुहोस् यसले मार्गनिर्देशनहरूको रूपमा काम गर्छ कि यो सुनिश्चित गर्नका लागि हामी ए the्गलहरू सही पाइरहेका छौं, र छविलाई विकृत पार्नबाट पनि जोगिन्छ। यो उपकरण सक्षम गर्न हामीले निम्न मार्ग अनुसरण गर्नुपर्नेछ:
हेर्नुहोस् - नियमहरू, वा हामी थिचेर किबोर्ड सर्टकट प्रयोग गर्न सक्दछौं। सेमीडी + आर.
हामी यति धेरै रेखाहरू कोर्न सक्दछौं, किनकि ती फाइलहरू देख्न सकिदैन जब हामी फाईल सुरक्षित गर्छौं.
छवि विकृत गर्नुहोस्
अर्को चरण, र सबै भन्दा पहिले, हामी छवि नक्कल गर्नेछौं। त्यसो भए हामी सुरु गर्नेछौं छविलाई रूपान्तरण गर्नुहोस्। हामी शीर्ष मेनूमा जान्छौं र निम्न मार्ग अनुसरण गर्छौं:
सम्पादन गर्दै - परिप्रेक्ष्य ताना.
यो विकल्प जाँच गर्दा हामीले क्लिक गर्नुपर्नेछ र प्लेनहरू परिभाषित गर्नका लागि तान्नुहोस्। हामी कम्तिमा दुईवटा विमानहरू समायोजन गर्नेछौं यस अवस्थामा भवनको ठाँउ परिभाषित गर्न सक्षम हुनु।
एक पटक हामीले तत्व परिभाषित गरेपछि हामी यसको लागि हेर्नेछौं "warp" बटन worktable को शीर्ष मा स्थिति सार्नको लागि सक्षम हुन। यसको मतलब यो हो हामी भवनको परिप्रेक्ष्य हेरफेर गर्न सक्छौं हाम्रो विचारमा।
परिमार्जन लागू गर्नुहोस्
जब हामीले यो निर्णय गर्छौं कि हामीले परिमार्जन समाप्त गर्यौं तब हामी "इन्टर" थिच्नेछौं। त्यस समयमा सुधार लागू हुनेछ। हामी देख्न सक्छौं, अन्तिम परिणाम एक धेरै एकीकृत भवन छ। मात्र समस्या जुन हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं त्यो यो हो, जब परिप्रेक्ष्यलाई सच्याउँदा हाम्रो फोटो वरिपरि प्वालहरू छन्। सब भन्दा सजिलो समाधान, यदि तपाईंलाई थाहा छैन कि कसरी ती भागहरू गुणा गर्ने, पुनःप्रेश गर्नु हो। यो विकल्प सम्भव छ यदि तपाईंसँग पर्याप्त मार्जिन छ।
सामग्री अनुसार भर्न
यदि हामीसँग छवि काट्ने विकल्प छैन भने, फोटोशपले हामीलाई विकल्प दिन्छ ती खाली ठाउँहरू स्वचालित रूपमा भर्नुहोस्.
हामीले ती खाली ठाउँहरू छनौट गर्नुपर्दछ जुन फोटोमा भएको छ र हामी यस मार्ग अनुसरण गर्नेछौं: सम्पादन गर्नुहोस् - भर्नुहोस्। एउटा विन्डो प्रदर्शित हुनेछ जसमा हामी विकल्प छनौट गर्नेछौं "सामग्री अनुसार भर्नुहोस्"। बाँकी छविलाई सन्दर्भको रूपमा लिँदा, कार्यक्रम स्वचालित रूपमा खाली ठाउँहरू भरिन्छ जुन हामीले सामग्री बिना नै थियौं।
"पहिले" र "retouching पछि" को नतिजा तल देख्न सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » फोटोशपमा परिप्रेक्ष्य कसरी सुधार गर्ने
Wacom ले डिजाइन पेशेवरहरूको लागि आफ्नो नयाँ Cintiq प्रो 32 कलम प्रदर्शन शुरू गर्दछ
भिभियन मायरको फोटोग्राफी पहिलो पटक प्रकाशमा आउँदछ